အမေးအဖြေများ Withdrawal အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး | ဆုတ်ခွာနည်းလမ်းများ - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
သင်သည်လက်ျာကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများလျှောက်ထားလျှင်သင်သည် OlympTrade platform ပေါ်တွင်အမြတ်အစွန်းရစေခညျြနှောငျပါပဲ။ ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်
သုံးစွဲဖို့အတော်လေးရိုးရှင်းပြီး web browser ကိုသို့မဟုတ်မိုဘိုင်း app ကနေတဆင့်အလွယ်တကူ။
ထုတ်ယူနှင့် ပတ်သက်. အတော်များများမေးခွန်းများကိုပလက်ဖောင်းရဲ့အမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအပေါ်မဖြေရှင်းနိုင်သေးရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ထိုအထဲကအများစုဟာပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်, ငါအောက်ပါအမေးအဖြေများ၌သင်တို့၏အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်မှဆုတ်ခွာနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုအများစုဖြေဆိုဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးမှာရရှိနိုင်ပါကဘာလဲဆုတ်ခွာ options များရှိပါသလဲ
အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးဟာသူတို့ရဲ့အဓိကငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာအဖြစ်, အွန်လိုင်း Skrill တူသောငွေပေးချေမှုစနစ်များနှင့်ဘဏ်လွှဲပြောင်းအကြွေး / ငွေကြိုကဒ်ပေးထားပါတယ်။
ဗီယက်နမ်ကုန်သည်များအဘို့, ပလက်ဖောင်းကိုလည်း Bao ကင်မ် eWallet အဖြစ်တူသောထင်ရှားတဲ့ဗီယက်နမ်အခြေစိုက်ဘဏ်များလက်ခံ Vitecombank နှင့် ACB ။
သင်သည်သင်၏အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်မှထုတ်ယူနိုင်ပါသည်နိမ့်ဆုံး $ 10 ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ယူမည်သည့်အဖိုးအခကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သို့သျောလညျးသငျသညျတတိယပါတီငွေပေးချေမှု processors ကိုများသောအားဖြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ငွေကြေးလဲလှယ်ကြေးနုတ်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့သင့်ပါတယ်။
အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးရုပ်သိမ်းရေးတောင်းဆိုမှုများ၏ 90% နာရီ 24 မှ 48 အတွင်းလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့လုပ်ငန်းများ၌ခံရဖို့ငွေထုတ်ဘို့အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်း5အထိကြာလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ VIP အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူသူတို့ရဲ့ရုပ်သိမ်းရေးတောင်းဆိုမှုများကိုပိုမိုမြန်ဆန်တခြားအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူထက်လုပ်ငန်းများ၌နေကြတယ်အဓိပ္ပာယ်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်အရလည်းသတိပြုရကျိုးနပ်ပါတယ်။
ဤသည်ဆက်ဆက်ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းသုံးပြီးသင့်ရဲ့ဆုတ်ခွာအောင်သည့်အခါအမှုကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအစစ်အမှန်အကောင့်ဖွင့်တဲ့အခါသင်ဂရုတစိုက်သင်နှစ်သက်တဲ့ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုစဉ်းစားပါ သို့ဖြစ်. အရေးကြီးပါတယ်။
သို့သော်ငွေပေးချေမှုစနစ် (များသောအားဖြင့်ဘဏ်တွေ) သင့်ဆုတ်ခွာငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုဘယ်မှာသာဓကရှိပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်မှာတော့ OlympTrade သင်ငွေပေးချေမှုစနစ်၏ထောက်ခံမှုအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်နှင့်သင့်ရန်ပုံငွေများပယ်ချ (သို့မဟုတ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ခါတိုင်းထက်ပိုကြာ) ခဲ့ကြရတဲ့အကြောင်းရင်း get အကြံပေး။
အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး $ 10 သကဲ့သို့အနိမ့်သိုက်လက်ခံသော်လည်း, အထက် $ 30 နှင့်သာသိုက်ဆုကြေးငွေကိုဆွဲဆောင်။
သင်ရရှိပါလိမ့်မယ်ယင်းဆုကြေးငွေပမာဏကိုသင်ငွေသွင်းမည်မျှအပေါ်မူတည်နှင့်ငွေပမာဏ၏ 10% နှင့် 50% အကြားနေကြပါတယ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာသင့်သိုက်အောင်သည့်အခါ Olimp ကုန်သွယ်ရေးကကမ်းလှမ်းဆုကြေးငွေငြင်းပယ်ဖို့ရှေးခယျြနိုငျကွောငျးသတိပြုရကျိုးနပ်ပါတယ်။
ဆုကြေးငွေကုန်သွယ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော်သူတို့ဆုတ်ခွာမရနိုင်ပါ။ ဆုကြေးငွေကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အမြတ်အစွန်းသို့သော်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်တစ်ဦးဆုတ်ခွာစေရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်မတိုင်မီသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုပထမဦးဆုံးစစ်ဆေးအတည်ပြုစေမလိုအပ်ပါ။ အကောင့်
သင့်ရဲ့အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်မှဆုတ်ခွာရိုးရှင်းပါသည်။ သင့်အကောင့် $ 10 ကျော်လွန်ကာငွေပမာဏကိုစုဆောင်းပြီးတာနဲ့အဲဒီခြေလှမ်းတွေကိုလိုက်နာ:
1 ။ သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အကောင့်ကို Log ။
2 ။ button ကို '' တစ်ဦးအပ်ငွေ Make '' ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ငွေပေးချေမှုစာမျက်နှာတွင် '' ငွေထုတ်ခြင်း '' option ကို click လုပ်ပါ။
3 ။ တောင်းဆိုထားသောသတင်းအချက်အလက်အတွက်ဖြည့်ပါ။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, သင်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ချင်ပမာဏကိုညီမျှဖြစ်သို့မဟုတ် $ 10 ကျော်လွန်ရပေမည်။
4 ။ ငွေပေးချေမှု option ကိုရွေးပါ။ အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးသာသင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်အကောင့်သို့ငွေသားငွေသွင်းဖို့အသုံးပြုတဲ့ငွေပေးချေမှုစနစ်ကတဆင့်ရန်ပုံငွေရုတ်သိမ်းဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်သတိပြုပါ။
ပြီးတာနဲ့ပြုအရောင်းအဝယ်ပြီးပါကရှေ့တော်၌ထိုတောင်းဆိုထားသောသတင်းအချက်အလက်အတွက်ဖြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ဆုတ်ခွာတောင်းဆိုမှုကိုပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်း 24 မှ5နာရီအတွင်းလုပ်ငန်းများ၌ပါလိမ့်မည်။
အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးသရုပ်ပြအကောင့်ကလွယ်ကူသည်သင်၏ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာကျင့်သုံးဆက်လက်လုပ်ကို virtual ငွေသားနှင့်အတူစည်ပင်နိုင်ပါသည်။ ဒီနေရာမှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် $ 10000 နှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုနေတဲ့သရုပ်ပြအကောင့် sign up ပြုလုပ်ပါ။
Tags: အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဆုကြေးငွေဆုတ်ခွာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုသရုပ်ပြအကောင့်ဆုတ်ခွာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအများဆုံးဆုတ်ခွာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုနိမ့်ဆုံးဆုတ်ခွာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုပိုက်ဆံဆုတ်ခွာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဆုတ်ခွာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဆုတ်ခွာန့်သတ်ချက်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဆုတ်ခွာနည်းလမ်း, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဆုတ်ခွာနည်းလမ်းများ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုရုပ်သိမ်းရေးအတွက်ရွေးချယ်စရာများ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဆုတ်ခွာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး Withdrawal ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဆုတ်ခွာအချိန်